चीन आकाशमा कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै, ८० किमि क्षेत्र उज्यालो हुने ! - Everest Dainik - News from Nepal
चीन आकाशमा कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै, ८० किमि क्षेत्र उज्यालो हुने !
बेइजिङ । आफ्नो आकाशमा चीनले एक कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने तयारी थालेको छ। यश चन्द्रमालाई सन् २०२० मा सिचुवान प्रान्तको चेङ्दुमा जमिनबाट ८० किलोमिटर माथि आकाशमा स्थापित गरिने भएको छ। उचाइ कम हुने भएकोले यो कृत्रिम चन्द्रमा खास चन्द्रमा भन्दा ८ गुणा ज्यादा चमकदार हुनेछ।
यसभन्दा पहिले पनि प्रकाश दिने कृत्रिम वस्तु आकाशमा पठाउने कोशिश भएको थियो । तर यस्तो योजना असफल भएको थियो। यस्तो प्रयास सबैभन्दा पछिल्लो पटक रूसले सन् २०१७ मा गरेको थियो। १४ जुलाई २०१७ मा रूसले कजाकिस्तानको ब्याकोनुर स्पेसपोर्टबाट अन्तरिक्षमा सोयुज रकेटबाट एक बस्तु पठाएको थियो।
याे पनि पढ्नुस चीनमा सडक दुर्घटनामा ५८ हजारको मृत्यु
यस बस्तुलाई चन्द्रमापछि सबैभन्दा चम्किलो भनिएको थियो। तर एक महिनामा नै यस परियोजनामा जोडिएका वैज्ञानिकले अन्तरीक्ष कक्षमा स्थापित हुन नसक्दा परियोजना बिफल भएको बताएका थिए। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
ट्याग्स: China, moon